तीज सकिएपछि गायिका विष्णु माझीलाई खाेज्दै माईतीघरमा पुग्यो प्र’हरी: आयो यस्तो जवाफ…
September 13, 2021 N88LeaveaComment on तीज सकिएपछि गायिका विष्णु माझीलाई खाेज्दै माईतीघरमा पुग्यो प्र’हरी: आयो यस्तो जवाफ…
काठमाडौँ । गायिका विष्णु माझीलाई खोझ्दै प्र’हरी उनको माइतीघर पुगेको छ । भूमिगतजस्तै रहेकी गायिका माझीको अवस्थाबारे बुझ्न प्र’हरी उनको माइतीघर पुगेको हो । स्याङ्जाको चापाकोटस्थित माझीको माइतीघर पुगेर उनको अवस्थाबारे बुझ्ने काम भएको स्याङ्जा प्र’हरी प्रमुख होबिन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । श्रीमान सुन्दरमणि अधिकारीको शब्दमा माझीले गाएको ‘चरी जे’लैमा’ बोलको गीत यतिबेला निकै नै […]
नेपालसँग ५ विकेटले हार्‍यो अमेरिका, नेपाली खेलाडीले मैदानमा देखाइदिए अमेरिकालाई गाेर्खे पावर !
September 13, 2021 N88LeaveaComment on नेपालसँग ५ विकेटले हार्‍यो अमेरिका, नेपाली खेलाडीले मैदानमा देखाइदिए अमेरिकालाई गाेर्खे पावर !
काठमाडौं । आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तराष्ट्रिय सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले अमेरिकालाई पराजित गरेको छ । ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा आइतबार भएको खेलमा नेपालले अमेरिकालाई ५ विकेटले पराजित गरेको हो । अमेरिकाले दिएको २ सय ३१ रनको लक्ष्य नेपालले ४९ ओभरमा मात्र ५ विकेट गुमाएर पूरा गर्यो । नेपालको जितमा ओपनर […]
September 13, 2021 September 13, 2021 N88LeaveaComment on महिलाका भित्री बस्त्रले श्रीमानलाई उत्तेजित बनाएको भन्दै उजुरी
मेक्सिको । मेक्सिकोमा एक महिलाले आफ्नी २३ वर्षीया छिमेकीमाथि देखिने गरी भित्री वस्त्र सुकाएकोमा आपत्ति जताउँदै प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरेकी छिन् । ती छिमेकीले उनका श्रीमानलाई उत्तेजित पार्न यसो गरेको आरोप लगाएकी छिन् । ४२ वर्षकी युभित्जा इले आफ्नी निर्लज्ज छिमेकीलाई नैतिकता र सभ्यता बिर्सिएको आरोप लगाएकी छिन् । उनले प्रहरीलाई उनकी छिमेकीको व्यवहार कुनै […]
डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘राजनीतिक दलले छिटो सहमति गरेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ’
September 13, 2021 N88LeaveaComment on डा. बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘राजनीतिक दलले छिटो सहमति गरेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ’
गोरखा । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजबादी पार्टी(जसपा)का राष्ट्रिय अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्परिसट (एमसीसी)अनुमोदन गर्दा नै राष्ट्रको हित हुने बताएका छन् । गोरखा सदरमुकाममा सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा डा भट्टराईले एमसीसीजस्ता विषयमा राष्ट्रिय दलबीचमा समझदारी आवश्यक रहेको बताएका हुन् । “एमसीसीको विषय अहिले पेचिलोरूपमा उठेको छ”, उनले भने, “यस्ता […]
अमेरिकाद्वारा नेपाललाई २ सय ३१ रनको लक्ष्य, नेपालले जवाफी ब्याटिङ गर्दै
September 13, 2021 N88LeaveaComment on अमेरिकाद्वारा नेपाललाई २ सय ३१ रनको लक्ष्य, नेपालले जवाफी ब्याटिङ गर्दै
काठमाडौं । आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गतको पहिलो खेलमा अमेरिकाले नेपाललाई २ सय ३१ रनको लक्ष्य दिएको छ । ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अमेरिकाले ५० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर २ सय ३० रन बनायो । यस्तै निसर्ग पटेलले २१ रन जोड्दा करिमा गोरेले १६ रन जोडे । संजय कृष्णमुर्थी […]
वाग्मतीमा नयाँ सरकार बन्दै, मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी आउट
September 13, 2021 N88LeaveaComment on वाग्मतीमा नयाँ सरकार बन्दै, मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी आउट
वाग्मती । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) वाग्मती प्रदेशले नयाँ सरकार बनाउन गठबन्धनमा आबद्ध दलसँग समन्वय थाल्ने भएको छ । पार्टीको सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकले समन्वय गर्ने जिम्मा दलका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई दिएको नेकपा संसदीय दलले जनाएको छ । सोमबार बसेको बैठकले दलको उपनेतामा प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री कृष्णप्रसाद खनाललाई चयन गरेको छ । खनाललाई मुख्यमन्त्री […]
शिक्षक लाइसेन्सको विज्ञापन खुलाएपछि मात्र स्थायी शिक्षकको विज्ञापन हुने !
September 13, 2021 N88LeaveaComment on शिक्षक लाइसेन्सको विज्ञापन खुलाएपछि मात्र स्थायी शिक्षकको विज्ञापन हुने !
काठमाडाैं । शिक्षक सेवा आयोगलाई अध्यापन अनुमतिपत्र (शिक्षक लाइसेन्स)को विज्ञापन खुलाएपछि र त्यसको नतिजा आएपछि मात्र स्थायी शिक्षकको बिज्ञापन खुलाउन दबाब परेको छ। प्रधानमन्त्रीकै तह बाट शिक्षा सचिव मार्फत आयोगलाई उक्त दबाब दिएको उच्च श्रोतको दाबी छ। १८ वर्ष उमेर पुगेका स्नाकोत्तर तह वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका र शिक्षक सेवा नियमावली अनुसार अयोग्य […]
कुन दिशामा धन राख्दा बढेर जान्छ ? कहाँ धन राख्दा नाश हुन्छ? (हेर्नुहोस् विस्तृतमा)
September 13, 2021 N88LeaveaComment on कुन दिशामा धन राख्दा बढेर जान्छ ? कहाँ धन राख्दा नाश हुन्छ? (हेर्नुहोस् विस्तृतमा)
हामी सबैसँग धेरै-थोरै धन हुन्छ नै। हामी सबै यहीँ चाहन्छौं कि हाम्रो धन दिनानुदिन बढीरहोस। जान्नुहोस् हाम्रो आफ्नो धन-सम्पदा, बहुमुल्य सामग्री र आभूषण कुन दिशामा कसरी राख्ने जसले गर्दा धन वृद्धि हुनेछ। यस्तो छ उपाय: पूर्व दिशा : यहाँ घरको सम्पत्ति र तिजोरी राख्नु निकै शुभ हुने गर्दछ। यसबाट उपलब्ध सामग्रीमा वृद्धि हुने गर्दछ। पश्चिम […]
ओलीलाई ताेरीका फुल देख्ने गरी अर्काे झड्का वामदेव गौतमपछि अर्का प्रभावशाली नेताले गरे एमालेमा नबस्ने निर्णय !
September 13, 2021 N88LeaveaComment on ओलीलाई ताेरीका फुल देख्ने गरी अर्काे झड्का वामदेव गौतमपछि अर्का प्रभावशाली नेताले गरे एमालेमा नबस्ने निर्णय !
काठमाडाैं । नेकपा एमालेमाथि अर्को बज्रपात भएको छ । माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपामा एमालेमा लागेपछि सांसद र मन्त्री दुवै पद गुमाएका एमाले केन्द्रीय सदस्य प्रभु साह अन्ततः एमालेमा पनि आफू रहन नसक्ने निचोडमा पुगेका छन्। एमाले र माओवादीबीचको एकताबाट बनेको तत्कालीन नेकपामै रहँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिएका र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा विघटन […]
September 13, 2021 N88LeaveaComment on १४ सांसदको पद चैट, सर्वोच्चको यस्तो निर्णय !
काठमाडौं । माधव नेपालसहित १४ जना सांसद पदमुक्त गर्नुपर्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दायर गरेको रिटको सोमबारको सुनुवाइ हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ । १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई सोमबार छलफलका लागि बोलाएको थियो । न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र मिरा खड्काको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर, सर्वाेच्चले हेर्न […]